Dubartiin Raashiyaa Kseeniyaa Soobchaak dorgommii pireezidaantummaa akka yaaltu dubbatte - BBC News Afaan Oromoo
Dubartiin Raashiyaa Kseeniyaa Soobchaak dorgommii pireezidaantummaa akka yaaltu dubbatte
Goodayyaa suuraa Sobichaak namoota biraatii dubbii himtuu ta'uun barbaaduu kootuu na kakaasee jetti
Dubartiin Raashiyaa Kseeniyaa Sobichaak filannoo pireezidantummaa biyyaattii Bitooteessaa Vilaadimiir Putiin ni dorgom jedhamee eegamu keessatti dorgomuuf
Sobichaak akka dorgomtuu ta'u hindandeenyeetti kan fudhatame yoo ta'u oggannaa mormitootaa dorgommiicha irraa dhorkames akka deeggartu dubbatti.
Haa ta'u malees, inni ammo akka isheen hindorgomne akeekachiseera. Kanaafuu namoonni tokko tokkos mormitoota jidduutti fuxoqiinsi umamu mala jechaa jiru.
Warri Kremliin garuu kaadhimamummaa ishee simachuun gutummaatti seera qabeessaadha jedhaniiru.
Obbo Naavaalinii wayita ammaa kanattis murtee hidhaa waggoota 20 mormii 'hinadabamiin' qindeessee jira jechuun itti murtaa'e irratti argama. Innis himannaa sobaa innis kan umameedha jedheen filannoo irratti akka hinhirmaanneef dhorkame.
Ibsi kunis yeroo dheeraaf haasa'amaa kan ture yoo ta'u, Aleksi Naavaalinii garuu hidhaa dhiheenya kanaatiin dura ji'a darbee keessa ijannoo isaa ifa taasise.
Goodayyaa suuraa Mr Naavaalinii Mr Putiiniif akka nama siyaasaa olaanaatti ilaalama.
Innis Sobichaakiin akka baachuu Kiremliiniitti ilaaluun, 'Kofaltuu bilisaa kan baramte' fi kan mormitootaa diiguun filannoo seera qabeessa gara qaaniitti fiduudhaa jedheeniira. Akka bareedduu agarsiisaaf dhiyaattuutti tuffachuun, 'like' fi hordoffii midiyaalee hawaasaa caalaa barbaacha jedheeniira.
Durbe Sobichaak garuu diigtuudha kan jedhamte mormuudhaan, Mr Naavaaliin kan pirezidaantumaaf dorgomu yoo ta'e akka dhiiftu dubbatte jirti. Haalli sunilleen baayyee kan amanamu hinfakkaatu.
Gaazexessituun gara soshaalitiitti geedarmte tunis warra sobdoota, hattootaa fi malaamaltummaa oggantoota isaaniin dadhabaniif 'sagalee guddaa' akka taatu waadaa galtee jirti. Kunis haasaa cimaa Mr Naavaalinii irraa ergifateedha.
Isheenis waggoota 14 keessatti dubarii dorgomtu kan jalqabaati. Dulli na filadhaa filannoo Raashiyaas gara Mudde 1 kan eegalu yoo ta'u, kunis yeroo paartiiwwan siyaasaa dorgomtoota isaanii filachuuf walgahii itti gaggeefataniidha.
Lammiilee Raashiyaa paartiilee siyaasaatiin hindeegaramnees, hanga yoo xinnaate mallattoo kuma 300 walitti qabaachuun danda'ameetti, innis ta'e isheen dhunfaadhaan pirezidaantummaaf galmaa'uuf mirga qabu.
Pirezidaanti Putiin, kan bara 2000tti yeroo jalqabaatiif akka pirezidantiitti filatame, ammas yaa dorgomu yaa dhiisuu ganaa hin ibsine.
Kseeniyaa Sobichaak eenyuudhaa?
Isheenis nama umuriin 35 yoo taatu intala kantiibaa St. Peetarsibarg obbo Anaatolii Sobichaakiitti. Innis booda bara 1990 keessa Vilaadiir Butiiniif akka ergamaa KGBtti mindeefame.
Maqaa mesootiin 'Hoteela Paarisii Rushiyaa' tiin kan waamamtu kunis sagantaa Doom-2 jedhamu dhiyeesuun beekamummaa agarte turte.
Namoota kaaniin akka dubara shubisaatti tufatamte. Haa ta'u malee sagantaa TV dhiqannaa hommichaa dhiyeessu isheetiin tokkichummaan xiyyeefannaa argatte.
Bara 2012tti Mr Putiin hiriira mormotootaaatti makamuun caalaa ija saaqatte.